बिहेमा करोडौँ खर्च,बिलासी जिवन,माझी बस्ती अलपत्र अनि दुनियासँग हारगुहार गरेर समाजसेवा (भिडियो सहित) - " सुलभ खबर "
काठमाडौं । समाजसेवा केका लागि गर्ने ? ‘समाजसेवी’ पहिले यो कुरामा स्पष्ट हुनु जरूरी छ । अरूको देखासिकी गरेर समाजसेवा गर्ने कि नाम, चर्चा र ख्यातिको मोहमा परेर समाजसेवाको ढोँग रच्ने ? फगत आत्मसन्तुष्टिका लागि गर्ने कि कुनै आश–अपेक्षा नराखी मनदेखि नै गर्ने ?एक वास्तविक समाजसेवीमा सेवाकर्मबाट आउने कुनै पनि प्रतिफलको लालच भने हुँदैन, हुनुहुँदैन । आफूले आर्जन गरेको ख्याती र सम्मानलाई समाजसेवामा जोडेर त्यसबाट अन्य आन्तरिक र बाह्य फाइदा पनि समाजसेवीले हेर्दैन, हेर्न हुँदैन ।
तर, आजकल साँच्ची समाजसेवा गरेर जनताको मन–मनमा बस्ने केही समाजसेवीलाई छाडेर भन्ने हो भने समाजसेवाको नाममा चर्चा बटुल्न खोज्नेहरूकै भीड देखिएको छ । ‘समाजसेवी’ बनेर वाहवाही बटुल्ने अनि त्यही नामलाई भजाएर व्यक्तिगत व्यापार–व्यवसायलाई बढावा दिने गजबको शैली अपनाएका छन् कथित समाजसेवीहरूले ।
यसै क्रममा नायिका श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी १४ मा निर्माणाधीन माझी बस्तीबाट हात झि’केकी छन् । श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा नायिका श्वेताले ५३ घर माझीका लागि एकीकृत बस्ती बनाउने घोषणा गरेर २०७४ जेठ १५ बाट निर्माण सुरु गरेकी थिइन् । तर, हालसम्म सो बस्ती निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन ।